Professional Industrial Laser Chiller, ရေ Chiller Dounturing |S&A ချစ်သူ
Laser Systems နှင့် Industrial applications များအတွက်တိကျသောအပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုကို 2002 ခုနှစ်မှစ.
Ultrafast လေဆာ & UV လေဆာရောင်ခြည်
CNC ဗိုင်းလိပ်တံ chiller
နှစ်ပေါင်း 20 ထိရောက်သောအအေးအတွက်အတွေ့အကြုံ
S&A Chiller ကို 2002 ခုနှစ်တွင်အနှစ် 20 အတွင်းအအေးထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံနှင့်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးယခုလေဆာလုပ်ငန်းတွင်အအေးခံသောနည်းပညာရှေ့ဆောင်နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောမိတ်ဖက်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုသည်။ S&A Chiller ကကတိပေးထားတဲ့အရာ - စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားခြင်း,
ကျွန်ုပ်တို့၏ recirculating ရေ Chillers များသည်စက်မှုလုပ်ငန်းအသုံးချပရိုဂရမ်အမျိုးမျိုးအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ နှင့်အထူးသဖြင့်လေဆာအပလီကေးရှင်းအတွက်, ကျနော်တို့အပြည့်အဝလိုင်းဖွံ့ဖြိုးPower Unit မှ Power မှမြင့်မားသောစွမ်းအင်စီးရီးအထိမြင့်မားသော power နှင့်±±℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃
ဖောက်သည်များကိုနိုင်ငံပေါင်း 50 ကျော်ရှိသည့်ဖောက်သည်များကိုနိုင်ငံပေါင်း 50 ကျော်အတွင်းတည်မြဲသောထုတ်ကုန်အရည်အသွေး, စဉ်ဆက်မပြတ်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များအတွက်လိုအပ်ချက်များကိုဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက်သူတို့စက်များအတွင်းရှိစက်ခေါင်းများအတွင်းရှိစက်ပစ္စည်းများရှိပြ problems နာများကိုဖြေရှင်းရန်ကူညီပေးနေသည် ......
S&A Chiller ကကတိပေးထားတဲ့အရာ - စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားခြင်း,
စက်မှုဈေးနှုန်း chiller system CW-6000 3KW အအေးစွမ်းရည်5မှ 35 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုအကွာအဝေး
1000w handheld လေဆာဂဟေစက်အတွက် chiller rmfl-1000 ကို Rack Mount
အေးအေးဆေးဆေးအအေးခံ cw-6210 တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သောစစ်ဆင်ရေး± 0.5 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တိကျစွာအအေး
CO2 Glass Laser Tube အတွက် Industrial cw-5000
အိတ်ဆောင်ရေ Chiller Cwup-20 Ultrafast လေဆာနှင့်ခရမ်းရောင်လေဆာရောင်ခြည်အတွက် 20 ± 0.1 ℃တည်ငြိမ်မှု RS485 ဆက်သွယ်ရေး
ကြီးမားသောစွမ်းဆောင်ရည်စက်မှုဇု္ဇာအတတ်အား Cwflation ကို 12KW fiber laser အတွက် 12000
24/7 ဖောက်သည်များ၏ထောက်ခံမှုကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းပြီး0ယ်ယူသူတိုင်း၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့်အသုံးဝင်သောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်များ, နှင့်ပြည်သူများအတွက်နိုင်ငံခြားရေး0န်ဆောင်မှုကိုရုရှား, ယူကေ, ပိုလန်, မက္ကဆီကို, စကာ, စင်ကာပူ, စင်ကာပူ,
တိုင်း S&A ကျွန်ုပ်တို့၏0န်ဆောင်မှုခံယူသူများအားကျွန်ုပ်တို့0န်ဆောင်မှုခံယူသူများကိုရေရှည်တည်တံ့သောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင်ကောင်းမွန်သောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကာလအတွင်းအစိုဓာတ်ကိုအစိုဓာတ်နှင့်ဖုန်မှုန့်များဖြင့်ကာကွယ်နိုင်သည့်တာရှည်ခံပစ္စည်းများနှင့်ပြည့်စုံသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင်0င်ရောက်နိုင်သည်။
S&A Chiller ကို 2002 ခုနှစ်တွင်အနှစ် 20 အတွင်းအအေးထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံနှင့်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးယခုလေဆာလုပ်ငန်းတွင်အအေးခံသောနည်းပညာရှေ့ဆောင်နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောမိတ်ဖက်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုသည်။
2002 ခုနှစ်မှစ. , S&A Chiller သည်စက်မှုဈေးဝယ်ယူနစ်များနှင့်အထူးသဖြင့်လေဆာရောင်ခြည်လုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးကို0န်ဆောင်မှုပေးသည်။ တိကျအအေးဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံကသင်လိုအပ်သည့်အရာကိုသိရှိနိုင်ရန်နှင့်သင်ရင်ဆိုင်နေရသောမည်သည့်စိန်ခေါ်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့သိရှိနိုင်စေသည်။ ± 1 ℃ 0.1 ℃ 0.1 ℃တည်ငြိမ်မှုမှတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက်သင့်ဖြစ်စဉ်များအတွက်သင်ဒီမှာသင့်တော်သောရေအအေးခန်းကိုအမြဲရှာတွေ့နိုင်သည်။
အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးလေဆာရေပေးသူများကိုထုတ်လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ 18000M2 ထုတ်လုပ်မှုအခြေစိုက်စခန်းတွင်အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီး, အထူးသဖြင့်စာရွက်သတ္တု,& ရေ Chiller ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သော condenser ။ နှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်သည်တစ်နှစ်လျှင် 100,000+ အထိရှိသည်။
အရည်အသွေးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထိပ်တန်း ဦး စားပေးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ထုတ်လုပ်မှုအဆင့်တစ်ခုလုံးတွင်ကုန်ကြမ်းများ0ယ်ယူမှုမှ0ယ်ယူမှုမှ0ယ်ယူရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Chilling တစ်ခုချင်းစီသည် Simulated Load အခြေအနေအောက်ရှိဓာတ်ခွဲခန်းတွင်စမ်းသပ်ပြီးအေဒီများ,
ကျွန်ုပ်တို့၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖွဲ့သည်စက်မှုတပ်ဆင်မှုနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်သို့မဟုတ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကူအညီများလိုအပ်သည့်အခါတိုင်းသင်၏0န်ဆောင်မှုတွင်အမြဲရှိသည်။ အမေရိကန်, ယူကေ, ပိုလန်, မက္ကဆီကို, မက္ကဆီကို, သြစတြေးလျ, စင်ကာပူ, အိန္ဒိယ, ကိုရီးယား,
S&A Chiller သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောထုတ်ကုန်များဖြစ်ပြီးလေဆာရောင်ခြည်များများကိုအအေးခံရန် (သို့) CPU ကိုအလွန်နည်းသော CPU's's's's's's Sit Temps တွင်ထားရှိခြင်းကဲ့သို့သောထူးခြားသောအသုံးချမှုများပြုလုပ်ရန်အသုံးပြုသည်။
- တစ် ဦး U.S. client ဖြင့်
ငါသုံးဖူးတယ်S&A ကျွန်ုပ်၏လေဆာရောင်ခြည်ထွင်းထုသည့်စီမံကိန်းနှစ်ခုအတွက် Chillers များနှင့်သူတို့ကကြီးစွာသောအလုပ်ကိုလုပ်နေကြသည်။ ပြီးတော့ကျွန်တော့်မေးခွန်းတွေကအရမ်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်တုံ့ပြန်ခဲ့ရတယ်။
- သြစတြေးလျ0င်ငွေဖြင့်
ဖက်စ်: + 86-20-84309967
မူပိုင်ခွင့်© 2021 S&A chiller - မူပိုင်ခွင့်ကိုလက်ဝယ်ထားသည်။